I-Electrode ye-Weld yentsimbi enobulali
Stainless Welding i electrode
I-Iron Iron Welding Electrode
Ukujongana neWelding Rod
I-Electrode ye-Weld ye-Weld e-Weld emincinci
Stainless Welding elektroni AWS E309L-16, A062,
I-Z408 Pure Nickel Cast Iron Electrode AWS ENiFe-CI
I-Electrode ye-Weld yentsimbi ye-Weld e-WS E6011
I-E71T-GS- ucingo lwe-welding cored wire
I-Electrode ye-Weld yentsimbi ye-Weld e-WS E6010
Welding umgubo: E6013
Kufanelekile ukuba ukuwelda isakhiwo carbon sentsimbi eliphantsi, ingakumbi iwelding ipleyiti intsimbi obhityileyo welds elifutshane discontinuous kunye nemfuneko iwelding yokupasa egudileyo.
Kufanelekile ukuwelda uhlobo olufanayo lwesakhiwo sensimbi engenasici, intsimbi edibeneyo kunye nezinto zentsimbi ezingafaniyo ezenziwe ngefayibha yokwenziwa, izixhobo zepetrokhemikhali, njl. yesakhiwo ngaphakathi kwinqaba.
Kufanelekile ukuba i-welding ye-carbon yentsimbi kunye ne-alloy yensimbi ephantsi, njenge-Q345, njalo njalo.
Kufanelekile ukuba i-welding ye-iron-high-iron iron kunye ne-nodular cast iron, efana nesilinda, ibhloksi yenjini, ibhokisi yegiya, njl.
Kufanelekile ukuwelda kobume bentsimbi obuphantsi njengombhobho, ukwakha inqanawa kunye nebhulorho njl.
Izicelo: I-AWS 5.20 E71T-GS sisikhundla sonke, ucingo olukhuselweyo oluzenzekelayo olwenzelwe ifilitha enye yokupasa kunye nokudibanisa ilap kwensimbi okanye ikhabhoni yentsimbi njengobunzima obungama-20, ngaphandle kokutsha. Irhasi engenacingo i-E71T-GS isetyenziswa rhoqo koomatshini abancinci abancinci be-volt ye-volt ye-110, enika isenzo se-arc esigudileyo ngesitshizi esincinci. Isantya sokuhamba siyakhawuleza, ukungena kulungile kwaye ukususwa kwe-slag kulula. QAPHELA: Njengazo zonke iingcingo ezikhuselweyo, i-E71T-GS iqulethe iikhompawundi, ezifuna ...
Umgubo we-E6013 welding wokwenza i-electrode ye-welding, eluhlobo lwekhabhoni yentsimbi yentsimbi ene-iron powder titania type coating. U-AC DC. Zonke-indawo iwelding. Inokusebenza okuhle kwe-welding kwaye iphantse yasasazeka. It has lula kwakhona ucinezelo, elungileyo slag detachability, ukuwelda egudileyo imbonakalo. Ibanga eliqhelekileyo kunye nebakala le-rutile onokukhetha kuyo.
Ukujongana neWelding Rod D608
I-D608 luhlobo lweCrMo cast iron eveza i-electrode ngohlobo lwegraphite. U-AC DC. I-DCRP (i-Polarity Direct eguqulweyo yangoku) ifaneleke ngakumbi. Ngenxa yokuba isinyithi esigqityiweyo yi-Cr kunye ne-Mo carbide enesakhiwo se-iron cast, umaleko ojikelezayo unobulukhuni obuphezulu, ukumelana nokunyusa okuphezulu kunye ne-silt egqwesileyo kunye ne-ore wear-resistant.
I-Z308 i-nickel echanekileyo yentsimbi ye-electrode GB / T 10044 EZNi-1 AWS ENi-C1 JIS DFCNi
Kufanelekile ukuba kudityaniswe iziqwenga ezicekethekileyo zentsimbi kunye neendawo zokuchwetheza, ezinje ngeentloko zezilinda, iibhloko zenjini zentsimbi ezingwevu, iibhokisi zegiya, kunye nesiXhobo soMatshini kungekudala.
I-Electrode ye-Stainless yeWelding engenanto ye-AWS E316L-16 （A022）
Umgangatho ogqithileyo kukusukela okungapheliyo kwezinto ezisetyenziswayo ze "Tianqiao", ukuze abathengi beTianqiao izinto ezisetyenziselwa ukuwelda bakwazi ukufumana iimveliso eziqinisekileyo kunye nokuzonwabisa ngexabiso lemali.
I-Electrode ye-Stainless yeWelding engenazintambo AWS E316-16, A202
I-E316-16 yicarbon ephezulu yentsimbi yeCr19Ni10 yentsimbi engenanto yenziwe ngeTitanium-calcium.Umxholo wentsimbi otyhidiweyo ngu -0.04% .Ibonelela ngokusebenza ngokugqwesileyo kokumelana nobushushu, anti-corrosion kunye nokuchasana nokumelana. ukusebenza kwetekhnoloji kwaye kunokusetyenzwa kuzo zombini i-AC kunye neDC.
Ifowuni kunye noWhatsapp: + 86-18403311434 (libalele)
Ifowuni kunye noWhatsapp: + 86-18232158300(Ellen)
Ifeksi: 0086 311 82623236
Idilesi: Idolophu yaseNanzuo, kwiNgingqi yase Yuanshi, eShijiazhuang, eHebei, China
Inkqubo yokuNxibelelana kweWelding Intro
Yintoni ii-electrode ze-Stick?
Izinto Ngokubanzi malunga neWelding Electrode